Ungazenza njani iifowuni zasimahla ezivela kwiTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Epreli 27, 2021 0 IiCententarios 367
I-Telegram yenye yezicelo ezibandakanya imisebenzi emininzi kwiminyaka yamuva. Phakathi kwezixhobo ezitsha ezibonelelwa yile nqonga yemiyalezo kwangoko kunokwenzeka ukuba wenze iminxeba yelizwi kubo bonke abafowunelwa bethu. Apha siza kuchaza eyona ndlela ilula yokwenza.
Ngelixa kuyinyaniso oko Ukukhetha ukubiza ilizwi kuthathe ixesha elide kunokuba kufanelekile ukuba lifakwe ukuya eqongeni, eyona nto ibalulekileyo kukuba sele iyasebenza kwaye singayisebenzisa nanini na sifuna. Ukuba ufuna ukufunda ukwenza iifowuni zasimahla kwiTelegram, siyakumema ukuba ufunde inqaku elilandelayo.
Ngaba iifowuni zezwi ngaphezulu kweTelegram zikhuselekile?
Ukuba ucinga ngombono wokubiza omnye wabafowunelwa bakho kwisicelo seTelegram, kunyanzelekile Okokuqala yazi yonke into enxulumene nokhuseleko ezinikezelwa yi-app kule nkalo.
Ngaba ufuna ukuqiniseka xa usenza umnxeba ngelizwi? Ke sifuna ukucebisa ngesixhobo esibonelelwa yiTelegram, enye yezona zinto zinokuthenjwa kwaye zikhuselekile ngalo mzuzu.
Akukho mfihlo kuye nakubani na ukuba esi sicelo sidibanisa ukhetho olunomdla ngokubhekisele kukhuseleko lwethu, kubandakanya ukhetho setha iphasiwedi ukufikelela kwiingxoxo ze-app. Ke akukho mntu wumbi unokungena kwiincoko zakho.
Ngokubanzi, kunokuthiwa njalo I-Telegram yenye yezona zicelo ezithembekileyo kunye nezikhuselekileyo zokuthumela imiyalezo. Ukuba ufuna ukuqinisekisa ubumfihlo bakho, unokhetho lokusebenzisa izingxoxo eziyimfihlo ezinikezelwa yi-app.
Inyathelo nenyathelo lokufowuna ngelizwi kwiTelegram
Sukulungela ukubhala nje, ngoku unokukhetha ukwenza umnxeba ngelizwi ngendlela elula kakhulu evela kwisicelo seTelegram. Ekuphela kwento esiza kuyidinga kukuba nenguqulelo yamva nje yeapps efakwe kwiselfowuni kwaye sibe neakhawunti eqongeni.
Indlela yokwenza iminxeba yelizwi evela kwiTelegram ifana kakhulu naleyo iphunyezwe kwezinye iinkqubo zokuthumela imiyalezo. Iindaba ezimnandi zezokuba Unokwenza iminxeba nakwesiphi na isixhobo, hayi ngokuyimfuneko kwiselfowuni.
Ukufowuna ngelizwi kwiTelegram landela la manyathelo alula:
Vula isicelo esivela kwisixhobo osithandayo
Khetha umfowunelwa ofuna ukumfowunela ngelizwi
Cinezela kwi igama lomntu phezulu kwesikrini
Cofa apha icon yefowuni kwaye silungile.
Qalisa incoko yelizwi kwiqela
Abasebenzisi beqonga leTelegram banokwenza iminxeba yelizwi kulo naliphi na iqela apho bakhoyo. Kufuneka nje balandele la manyathelo:
Khetha iqela apho uya kwenza umnxeba welizwi
Cinezela malunga negama leqela
cofa kumanqaku amathathu athe nkqo avela ngasekhohlo
Zininzi iindlela onokukhetha kuzo. Kule meko khetha "Qalisa incoko yelizwi"
Ilungile. Incoko yelizwi iqale.
1 Ngaba iifowuni zezwi ngaphezulu kweTelegram zikhuselekile?
2 Inyathelo nenyathelo lokufowuna ngelizwi kwiTelegram
3 Qalisa incoko yelizwi kwiqela
Ungayithumela njani kwi-twitter?